April 2015 - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Aung Ko Htet at 10:19:00 PM 0
Thiha Htike at 7:55:00 PM 0
" ၁။ သူမတူတဲ့ အားထုတ်မှုရှိနေလို့
၂။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်မလိမ်ပဲ လိုတာကို ဖြည့်နိုင်လို့
၃။ ရယူချင်ရင် ရနိုင်မယ့်နည်းလမ်းသာမက စိတ်ရော ကိုယ်ပါ ၀င်ပါလို့
၄။ ဖြစ်ချင်စိတ်တိုင်းကို ဖြစ်သင့်တယ်ထင်ရင် နောက်မဆုတ်ပဲ အားကုတ်အားခဲ အားထုတ်လို့
၅။ အချိန်တွေကို တန်ဖိုးမဲ့မကုန်ဆုံးစေလို့
၆။ အထင်ကြီးစိတ်များလာရင် ရောက်လေရာမှာ ရပ်တန့်သွားတတ်တဲ့သဘောကို အမြဲ သတိထားလို့
၇။ အောင်မြင်ချင်စိတ်ကို အတိုင်းအတာတစ်ခုမှာ ရပ်မနေလို့
ဒီ ၇ ချက်ကြောင့်လို့ယုံကြည်လက်ခံပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိတ်ဆွေဟာ နံပတ် ၂ အချက်ကို အရင်ဆုံး လုပ်ပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ်သုံးသပ်ပါ။ လက်ခံပါ။ ပြင်ဆင်ပါ။
ဒါဆို အောင်မြင်မှုဆိုတာ လက်တစ်ကမ်းမှာပါလားလို့ သိမြင်ထိတွေ့လာပါမယ်။ "
လင်းလက်လွန်း at 6:09:00 PM 0
ချို ခြင် ပူ စပ်
iOS Device ကိုကျွမ်းကျွမ်းကျသ်ကျင်ကိုင်တွယ်ကြရအောင် နှင့် အခြား ဖုန်းနှင့်ပါတ်သတ်တဲ့စာအုပ်များ
Mr. Win Hlaing at 12:08:00 PM 0
မှတ်ချက် စာရေးဆရာအားခွင့်လွတ်ပေးပါရန် စာရေးဆရာ နာမည်ရှာမတွေလို့ မထည့်ပေးပါလိုက်ပါ။
Hacker တို့၏ထိုးဖောက်နည်းများနှင့် HACKER အန္တရာယ်ကာကွယ်နည်းများ
Android ဖုန်းကိုင်ဆောင်သောသူများအတွက် သိထားသင်တဲ့အကြောင်းအရာများ စာအုပ်
IPHONE အသုံးပြုသူများနှင့် စက်ပြင်ဆရာလက်
Thiha Htike at 8:10:00 PM 0
" ဖြစ်ချင်စိတ် ကြီးစိုးလာရင် လုပ်ချင်စိတ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်။
ဖြစ်ချင်စိတ် နည်းလို့ မလုပ်ချင်တာ
မလုပ်ချင်စိတ်က ပိုများတဲ့အတွက် ဘာမှမလုပ်ဖြစ်ဘူးပေါ့
ဘာမှဖြစ်မလာသူတွေဟာ ဖြစ်ချင်စိတ်သေးငယ်နေသေးလို့ပါ။ "
Android ဖုန်းတွေမှာအသုံးများတဲ့ Viber Version -Viber v5.3.0.2274 Apk
Mr. Win Hlaing at 10:26:00 PM 0
Android ဖုန်း tablet တွေအသုံးများနေတဲ့ Viber Version သစ်လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီကောင်လေးကတော့ ဒီနေ့ထွက်တာပဲရှိသေပါတယ်။ လူတိုင်းအတွက် မရှိမဖြစ်ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။ ဘာဖြစ်ဆိုတော့ Viber ဆိုတာ Online ရတာနှင့် Free call တိုင်းတပါးသို့ရောက်နေသော အမေအဖေတွေကို free call,free Chatting and free တိုင်းတပါးသို့ေ၇ာက်နေသော သူကိုတွေကို မြင်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ချစ်စရာ အရုပ်ကလေးတွေ ပါလာတာကိုတွေ၇ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Update OR Version new သုံးချင်းသူများအတွက် အောင်မှာဒေါင်းနိုင်ပါတယ်။
လင်းလက်လွန်း at 5:00:00 PM 0
Ph no ……………09428187125
လင်းလက်လွန်း at 4:49:00 PM 0
Y523-L076,Android 4.4, EMUI2.0，V100R001CHSC01B021 < Official Firmware >
Ye Naing at 4:10:00 PM 0
G616-L076,Android 4.3,Emotion UI ,V100R001CHSC01B023 < Official Firmware >
Ye Naing at 4:08:00 PM 0
C8817D,Android 4.4,Emotion UI 2.3,V100R001C92B262 < Official Firmware >
Ye Naing at 4:05:00 PM 0
လင်းလက်လွန်း at 11:30:00 PM 0
🎼 စီးပွါးအောင်မြင်💰 ကြံစည်တိုင်းအထမြောက်ပီး
👍 အရာရာအဆင်ပြေ👌 ဘေးမသီရန်မခဘဲ
✌✌✌✌ လောင်းပီနော် ဗွမ်းးးးးး 💦💦 ဗွမ်းးးးးး💦💦 ဗွမ်းးးးးး?💦 happy myanmar new yearဖြစ်ပါစေ 😁😁
လင်းလက်လွန်း at 10:11:00 PM 0
တင်တွေ ရင် လုံအောင်ဖုံးလို့
ကျော်ကျော် (ခမရ ၃၈၉ )
Ye Naing at 6:31:00 PM 0
Download Link : http://pan.baidu.com/s/1mgl7try
Ye Naing at 6:27:00 PM 0
Download Link : http://pan.baidu.com/s/1bnnlBsF
Password : cvdg
လင်းလက်လွန်း at 9:04:00 PM 0
ကျွန်တော် ကဗျာ နှင့်စာရေးဆရာ
၂၂ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ ဖြစ်ပါသောကြောင့်
ဟိဟိ ဘယ်သူမှ မရှိလို့ ပရိတ်သတ်ကို ပြောတာ။
လင်းလက်လွန်း at 8:46:00 PM 0
လေသလပ်လို့ ခြောက်သွေ့ခဲ့ပြီ #####
အာရုံထဲမှာ ၀ိုးတ၀ါးနဲ့ေ၀၀ါးလို့ပေါ့ ::::::::
ကဇွန်းမသရဲ at 12:05:00 PM 0
Thiha Htike at 10:46:00 AM 0
ပထမ ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ ပို့စ်က Electronic ရဲ့ အစပိုင်းလေ အခုဒီတစ်ခါတော့ Knowledge တွေမတင်သေးဘူး အခုမှ အစပိုင်းတွေဆိုတော့ စာလုပ်လေးဖတ်မှ စဉ်းစားတတ်မယ်လေ ဒါကြောင့်အောက်က စာအုပ်လေးဖတ်နော်
နောက်ထပ် ထပ်တင်ချင်ပါသေးတယ် အခြားတင်စ၇ာများနှင့် ဆိုဒ် ၊ facebook မှာလည်း မေးထားတာလေးတွေပြန်ဖြေရအုံးမှာမို့နောက် ကိုမျိူးသူရ ရေးသားထားတဲ့ စာအုပ်လေးကို မတင်ပေးနိုင်လိုက်လို့စိတ်မကောင်းပါဘူး...
Thiha Htike at 10:44:00 AM 0
တင်ပေးထားပြီးသားပါ မေးသူများလွန်းလို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ ကျွန်တော်လည်းမအားတာနဲ့ပို့စ်တွေကို update တွေတင်ပေးဖြစ်တာပါ...
How To Remove iCloud Activation Officially
ဈေးသက်သာလို့ iPhone တစ်လုံး ဝယ်ထားလိုက်မိပါတယ်..
မူလပိုင်ရှင်နဲ့ ဆက်သွယ်လို့ မရတော့လို့ပါ..
စသည်ဖြင့် ခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးနဲ့ စတင်မေးမြန်းလာကြပေမယ့် နောက်ဆုံးမှာတော့ iCloud Activation ကို ကျော်ချင်လို့ နည်းလမ်းရှိရင် ပြောပြပေးပါ ဟူ၍ အဆုံးသတ်တွေ တူညီကြပါတယ်..
သူတို့တွေ အားလုံးဟာ "This iPhone is currently linked to an Apple ID. Sign in wth the Apple ID that was used to set up this iPhone" ဆိုတဲ့ စာတန်းလေးကို မြင်တွေ့လိုက်ရလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
DoulCi က iCloud Activation ကို ကျော်လို့ရပြီလို့ သက်သေ အထောက်ထားများနဲ့တစ်ကွ ချပြလိုက်တဲ့ အချိန်ကစလို့ အားလုံးရဲ့ စိတ်ထဲမှာ iCloud ကို ကျော်လို့ရတာပဲလို့ စိတ်ထဲစွဲသွားပါတယ်...
အဲဒီက စတင်လို့ internet မှာ iCloud Bypass software တွေပေါ်လာပါတော့တယ်၊ အားလုံးဟာ Fake တွေ Scam တွေဖြစ်ပြီး စက်ကို ဒုက္ခပေးတတ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အခုတော့ iCloud Activation ကို အမှန်တစ်ကယ် Bypass လုပ်ပေးနိုင်မယ့် အဖြေတစ်ခုကို တွေ့ထားပါပြီ...
အထူးသတိပြုဖို့ တစ်ခုကတော့ ခိုးခံထားရတယ်လို့ Apple ကို Report လုပ်ထားတဲ့ iPhone, iPad တို့ဆိုရင်တော့ ဒီနည်းနဲ့လည်း အလုပ်ဖြစ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ Clean Device တွေမှာသာ အဆင်ပြေနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
အကယ်၍ မိမိမှာ တစ်ဆင့်ပြန်ဝယ်ထားတဲ့ iPhone/iPad ရှိနေပြီး ဒီDevice Clean ဖြစ် မဖြစ်ဆိုတာ သိနိုင်ဖို့ အတွက် Device IMEI number နဲ့ စစ်ဆေးကြည့်နိုင်ပါတယ်။
>> IMEI number ရှာဖွေနည်း
ကိုယ့်ရဲ့ IMEI number ကို သိပြီဆိုရင်တော့ မိမိရဲ့ Device ဟာ Blacklist ထဲမှာ ထည့်ထားခံရပြီလားဆိုတာကို မသင်္ကာရင် စစ်ဆေးကြည့်နိုင်ပါတယ်။
>> Check iDevice Blacklisted
iCloud Lock Remove လုပ်ပေးနိုင်သော Device များ
ယခုဖော်ပြမည့်နည်းလမ်းဟာ အခမဲ့တော့ မဟုတ်ပါဘူး၊ ထိုက်တန်တဲ့ ဝန်ဆောင်ခကို ပေးချေပြီးမှ iCloud Activation Remove လုပ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်..
**iCloud Activation ကို Remove လုပ်နည်း**
၁) မိမိ iDevice ၏ IMEI number ကို မှန်ကန်စွာ သိရှိအောင် ရှာထားပါ။
၂) iCloud Removal Official website ဤနေရာသို့ သွားပါ။
၃) IMEI number ကို အမှာစာမှာ ဖြည့်သွင်းပေးပါ။
၄) iCloud lock ကို Remove လုပ်ပြီးသွားတဲ့ အခါမှာ email နှင့် အကြောင်းပြန်ကြားပါလိမ့်မည်။
၅) နောက်ဆုံးမှာတော့ မိမိကိုယ်ပိုင် iCloud account ကို ဖြည့်သွင်းပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
မှတ်ချက်။ ။ ဖော်ပြပါဆောင်းပါးသည် ကြောငြာဆောင်းပါး မဟုတ်ကြောင်းနှင့် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ယခု service ကို အသုံးမပြုဖူးသေးကြောင်း ဝန်ခံပါသည်။ သို့သော် အဆိုပါ website သည် Unlock service နာမည်ရပြီးသော site တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် အဆိုပါ service ကို အသုံးပြုမည့်သူသည် မိမိ၏ ကိုယ်ပိုင် စွန့်စားမှု (Own Risk) သာဖြစ်ပြီး၊ စာရေးသူနှင့် မသက်ဆိုင်ပါကြောင်း ကြိုတင် အသိပေးအပ်ပါသည်။
Credit to မိုးသကြား
မှတ်ချက် ။ ။ bypass Tool များဖြင့် ကျော်နည်းကို ကျွန်တော်ပြောထားတဲ့အချိန်ရောက်မှ တင်ပေးပါ့မယ်နော် ... iphone 6+ ထိရတယ်လို့ဆိုထားတာပဲ...
Second မှတ်ချက် ။ ။ ယခုအတောအတွင်း မေးထားသည်များတွင် ယခု i cloud by pass လုပ်နည်းသာရှိသည့်အတွက် ဒါသာ တစ်ခုတည်းတင်ခြင်းဖြစ်သည်...
Thiha Htike at 10:43:00 AM 0
ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ ယခုပို့စ်က ခေါင်းစဉ်လေးက" Mobile Service လောက တစ်ခုလုံးဆီသို့ " ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပါ ဘာလို့ပေးရတာလည်းဆိုတော့ အရင်ပို့စ် " Mobile ခဲဆော်ပညာရှင်ကြီးများခင်ဗျာ
" ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်က Hardware ပို့စ်လေးတွေတင်တာပါ... ဒီခေါင်းစဉ်လည်း အမြဲလိုလိုတင်မှာပါ ဒီမှာဘာတင်မလဲဆိုတော့ Software ပိုင်းများကို တင်ပေးသွားမှာပါ နောက်ပြီး
အခုတင်မဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာ ဒီဆိုဒ်မှာရှိချင်ရှိပါလိမ့်မည် ၊ ဒီဆိုဒ်မှာရေးသော ဘလော့ခ်ဂါတွေရေးရင်ရေးခဲ့ဖူးမယ် သို့ပေမဲ့ ကျွန်တော်က သူတို့ကို ဒီပို့စ်လေးက
သင်တန်းဆရာတစ်ယောက်လို အစပိုင်းကနေပြီး ပြင်ဆင်နိုင်တဲ့အထိ တင်ပေးသွားမှာပါ အဲ့ကြောင့်ပါ တင်တာတူရင် နားလည်ပေးဖို့ပါ...ဒီလိုမျိူးခေါင်းစဉ်တွေပေးလိုက် ဆရာကြီးလို့မထင်ပါနဲ့
ကျွန်တော်ဘာမှမတတ်ပါဘူး Online မှာရှိတဲ့ Share Function ကို နားလည်လို့ Sharing လုပ်နေရတာပါ အခုဒီစာကိုဖတ်နေတဲ့ bro or Sis တို့လောက်ကို မသိတာပါ ကိုယ်မြင်နေတာကို
လိုအပ်သူတွေဆီကိုပို့ပေးတာပါ ဘယ်လိုပြောရမလဲ Link ချိတ်ပေးတယ်ပေါ့ Ok ပါ အောက်က လိုအပ်တာလေးယူသုံးပေါ့...
Window ,java phone နည်းပညာ ဆိုင်ရာများကတော့စာအုပ်အနေနဲ့ မရှိသလောက်ရှားပါးတဲ့အတွက် Tutorial လေးတွေပဲ အခုခေါင်းစဉ်အောက်မှာတင်ပေးသွားပါမည်
Thiha Htike at 10:42:00 AM 0
" ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ " ကျွန်တော် ယနေ့ ( 11.4.2015 ) မှစပြီး (17.4.2015) ထိ နှစ်သက်အတွက် ခရီးထွက်ရမှာမို့ ကျွန်တော့်ဖုန်းကို ပိတ်ထားခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ် သူ့အလို လိုပွင့်နေခဲ့ရင်လည်း ကျွန်တေ်ာမရှိတဲ့အတွက်ဖြေပေ့းနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး ကျွန်တော့် ကို bro / sis တို့ ပို့ထားတဲ့ ကဗျာ များ ရှိခဲ့သည်ဖြစ်စေ၊ မေးချင်သော အကြောင်းအရာများ နည်းပညာများ ရှိခဲ့သည်ဖြစ်စေ (17.4.2015) ထိ ဆောင့်ပေးပါခင်ဗျ (ဒါတောင် မနဲအချိန်လုတင်နေတာ)ဒါဟာ ပြောရမဲ့ကိစွမို့ပါ မပြောဘဲ ဖုန်းစက်ပိတ်ထားမယ် ဆိုရင် ကျွန်တော်ကို မေတာလေးတွေပို့မယ်လေ ကျွန်တော်သွားမယ့် နေရာက တောင်တန်းတွေရှိတဲ့နေရာဆိုတော့ နည်းနည်းကြောက်မိတယ်ဗျ ကဲကဲ အခုပို့စ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက် ဒီနေ့မှစပြီး 17 ရက်နေ့ထိ စက်ပိတ်ထားမယ်လို့ပြောတာပါ
မှတ်ချက်။ ။ နောက်အများကြီး Sharing လုပ်နိုင်အောင် အားမွေးနေ့သဘောပါ စာလိုလေးဆိုရရင်တော့
" သစ်ခုတ်သမားက သစ်ပင်ခုတ် ဖို့ အချိန်တစ်ရက်ရတယ်ဆိုရင် နေ့တစ်ဝက်ကို ဓါးသွေးတယ် ဆိုသလိုပေါ့ဗျာ "